မင့်ရင်ထဲထိ တိုးလျှိုးပေါက် မြင်နေရပါလား..
ရွှေတွေ ငွေတွေ မပါ
ချွေးနံ့သင်းတဲ့ မင်းကိုယ်ခန္ဒာ ထွေးပွေ့ပရစေ
“ကျွန်ကလား မယားတောသူ” ရှေးရိုးစကား
၀န်ခံချက်။ ။ ငယ်ငယ်ကကြားဖူးနေကျ ကျေးလက်တေးတွေကို လွမ်းဆွတ်သောစိတ်ဖြင့် ဒီကဗျာကို ရေးဖွဲ့ပါတယ်။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:43:00 PM2comments
Posted by Nyein Chan Aung at 1:49:00 AM3comments
အရောင်တွေ အရိပ်တွေ ရနံ့တွေ
တစ်ခါတစ်ခါ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို ဆူညံပေါက်ကွဲတတ်ပြီး
တစ်ခါတစ်ခါ သင်္ချိုင်းတစ်စပြင်တစ်ခုလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တတ်သူ
ကင်းဘတ်စပေါ်ကျလာတဲ့ ရောင်စုံ ဆေးစက်တွေမှာ
သူ့ဆီမှာ အချစ်က ပေါင်မုန့်အသိုးတစ်လုံး
သူ့ဆီမှာ အချစ်က တစ်ရှူးအဟောင်းတစ်ခု
အချစ်က သူ့အတွက် နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့်လည်းဖြစ်ရဲ့
မှောင်မိုက်နေတဲ့ မောင့်မတ် အခန်းကျဉ်းထဲမှာ
အရိုးကွဲအောင်အေးတဲ့ ပါရီဆောင်း နှင်းထုအောက်မှာ
ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေးရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ
မောကြီးပမ်းကြီး သူရှာဖွေနေခဲ့တဲ့ အရာ
ကမ္ဘာမြေအတွက် အချစ်နဲ့အသစ်တွေကိုပဲ အမြဲတမ်းပေးခဲ့တယ်
ဓါးတစ်ချောင်းလို ချွန်ထက်တဲ့ အနုပညာ
သွေဖည်မူမရှိဘူး၊ ရှေ့ကိုပဲ မရပ်မနားသွားခဲ့
သာမန်နှလုံးသားနဲ့ ခံစားကြည့်လို့ မတွေ့ထိနိုင်ဘူး
တစ်လောကလုံးကို နာကျည်းနေတဲ့ တစ္ဆေတစ်ကောင်
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူသားအဖြစ်ကို ရရှိခြင်းပါပဲ
အချစ်က ရမ္မက်ထက် ပိုပြီးသိမ်မွေ့တဲ့အရာ
ပေါင်မုန့်နဲ့ စပျစ်သီးတွေက အရေးမကြီးပါဘူး
မိုဒီလျာနီ ၁၉ ရာစု အီတလီပန်းချီဆရာ
Posted by Nyein Chan Aung at 9:22:00 PM5comments
“ဘ၀၏ပထမဦးဆုံးများ” …. တဲ့။ လွမ်းမောဖွယ် ကောင်းပါသည်။ ငယ်ဘ၀ မွေးဖွားလာချိန်မှ ယနေ့ကာလအထိ ကြုံဆုံခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည် စဉ်းစား တူးဖော်ရသည်မှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသလို လူတစ်ယောက်၏ မှတ်မိနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်၍ တနည်းအားဖြင့် စိန်ခေါ်မူတစ်ခုဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးသော ဘလောဒ့်ဂါ ကိုအောင်သာငယ်က ဤခေါင်းစဉ်အားရေးပါရန် သတိတယ ကျနော့်ကို တက်ဂ်ထား၍ ၄င်းအားကျေးဇူးတင်မိသည်။ ကျေးဇူးပဲအစ်ကိုရေ….
ပထမဆုံး မက်ခဲ့ဖူးတဲ့အိပ်မက် - ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဖြစ်ရန် (အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင်)
လူ့လောကထဲသို့ ပထမဦးဆုံး ရောက်ရှိလာသည့်အရပ်ဒေသ - ကျောင်းတော်ရာကျေးရွာ
ပထမဦးဆုံးကစားခဲ့သော ဂိမ်း - သားရေပင်ပစ်ခြင်း
ပထမဦးဆုံး သတိထားနှစ်သက်မိသော အရာများ - ခြေသွားလမ်းကလေးများ၊ လှပ၍သာယာသော ညနေခင်းများ၊ လယ်ကွင်းများ (မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀တွင်)
ပထမဦးဆုံး သူငယ်ချင်း - ခင်မောင်ဝင်း (သာဒင်ကြီးဟု အများကခေါ်သည်)၊ မိန်းကလေးများနှင့် မည်ကဲ့သို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမည် မသိ၍ ငယ်စဉ်က မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းမရှိခဲ့ပါ)
ပထမဦးဆုံးဆရာမနာမည် - ဒေါ်မြင့်မြင့်မြင့်စန်း
ပထမဦးဆုံးဖတ်ဖူးသော စာပေ - ရွှေသွေး၊ မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် (နှစ်စောင်လုံး တစ်ပြိုင်တည်းဖတ်သည်)
ပထမဦးဆုံး ရင်ခုန်မိသူ - အင်္ဂါနေ့တွင်မွေးဖွားသူဖြစ်သည်။ ဖြောင့်စင်းမဲနက်သော ဆံပင်ရှည်ရှည်များနှင့် ဘယ်ဘက်ပါးပြင်ပေါ်တွင် မှည့်နက်ကလေးတစ်လုံးပါကာ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နှင့် ခန္ဒာကိုယ်ကျော့ရှင်းပြေပြစ်သော အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ကျနော်တို့မြို့ငယ်ကလေးတွင် ကာလသားများ အကြား၌ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား၍ ပြည်ကောလိပ်တွင် မေဂျာကွင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရလျှင် ယနေ့တိုင်သူမလောက် လှပပြေပြစ်၍ ကျက်သရေရှိသော မိန်းကလေးကို မတွေ့မိသေးပါခင်ဗျာ။ ယခုအခါ သူမမှာ ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ သူမက ကျနော့်ကို ချစ်တာ မသေချာပေမဲ့ ကျနော်က သူမကို ချစ်ခဲ့တာသေချာပါသည်။
ပထမဦးဆုံးဝန်ခံစကား - ခင်ဗျားကို ကျနော်ချစ်မိနေပြီ (သူမသည် ကျနော့်ထက် ၂ နှစ်ခန့်ပိုကြီးသောကြောင့် ခင်ဗျားကျနော်နှင့် စကားပြောပါသည်)
ပထမဦးဆုံး ကျောင်းပြေးခဲ့သော အချိန်ကာလ - (၈) တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင်ဖြစ်ပါသည်
ပထမဦးဆုံးသောက်ဖူးသော အရက် - ဆန်ကိုချက်ထားသော တောအရက်ပြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဧပြီလ
ပထမဦးဆုံးသောက်ဖူးသော ဆေးလိပ် - မာဘိုရိုလိုက် (အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်တွင် သူငယ်ချင်းများ ဆေးလိပ်စသောက်ကြရာ၊ ကျနော်သည် မာဘိုရိုသောက်နိုင်မှဆေးလိပ်သောက်မည်ဟုစိတ်မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က သုံးရက်တစ်ခါ၊ လေးရက်တစ်ခါသာ မာဘိုရိုစီးကရက်ကို သောက်နိုင်သဖြင့် ကြုံရာဆေးလိပ်သောက်သော သူငယ်ချင်းများ ဆေးလိပ်စွဲခဲ့သော်လည်း မာဘိုရိုသောက်နိုင်မှသာ ဆေးလိပ်သောက်သော ကျနော်မစွဲခဲ့ပါ.. ကျေးဇူးပဲ မာဘိုရိုရေ..)
ပထမဦးဆုံးရဖူးသောဆု - (၄) တန်းနှစ်တွင် (ရှားရှားပါးပါး) ပထမဆုရဖူးပါသည်။
ပထမဦးဆုံးကိုင်တွယ်ပစ်ခတ်ဖူးသော လက်နက် - သားရေပင်၊ လေးခွ (မည်သည်ကို အရင်ကိုင်တွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ကို အတိအကျမမှတ်မိတော့ပါ)
ပထမဦးဆုံးပစ်ခတ်ဖူးသော လူသတ်လက်နက် - အေကေ ၄၇ (လူကိုပစ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ငှက်ပစ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)
ပထမဦးဆုံးထိုင်ဖူးသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင် - “ရွှေကဖီး” ဟု အမည်ရပါသည်
ပထမဦးဆုံးဝင်ငွေရှာဖူးသော အလုပ် - ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် သင်ခန်းစာများကို လက်ရေးသေးသေးလေးများဖြင့် ကူး၍ စာအုပ်ငယ်လေးများအဖြစ်ချုပ်ကာ၊ စာအုပ်ငယ်ပေါင်းများစွာ ကော်ပီကူးပြီး စာခိုးချရန် ဆယ်တန်းကျောင်းသားများကို ရောင်းချခြင်း
ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသော နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် - ထိုင်း
ပထမဦးဆုံး စိုက်ခဲ့သော သစ်ပင် - ပြောင်းဖူးပင်၊ စံပယ်ပန်းပင် (မိုးဦးကျစ ကာလတစ်ခုတွင် ထိုအပင်များကို ကျနော်စိုက်ခဲ့တာ မှတ်မိသည်။ မည်သည့်အပင်ကို ဗွေဆော်ဦး စိုက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို အတိအကျမမှတ်မိတော့ပါ)
ပထမဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားမိသော နိုင်ငံရေးဝါဒ - မာတ်စ်ဝါဒ
ပထမဦးဆုံး သတိထားမိသော သီချင်း - မိုးရေတက်ရေ တဖွေးဖွေး ကွင်းကျယ်အဝေးပြေး၊ လယ်စောင့်တဲလေးခြေတံရှည် မိုးကုပ်အောက်မှာနေ၊ ကြာဖြူတပွင့် ငုံတပွင့် တဲနဲ့ ပနံတင့်… စသည့်သီချင်း.. တွံတေးသိန်းတန်သီဆိုသည်ထင်ပါသည်
ပထမဦးဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဖူးသော ဘလော့ဒ် - နစ်နေမန်း
ပထမဦးဆုံး ဘလောဒ့်မိတ်ဆွေ - အလွမ်းအိမ်
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လူ့ဘ၀ကို စိတ်နာကျည်းခြင်း - ၄ နှစ်ခွဲအရွယ်တွင် အမေမှ ညီမလေးကို မွေးဖွားသောကြောင့် ကျနော်နို့မစို့ရတော့ပါ။ နို့ဖြတ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျနော်ဒေါသူပုန်ထခဲ့သည်.. ညီမလေးကို လွှင့်ပစ်ရန် အမေ့အား ပူဆာခဲ့သည်ကို မှတ်မိနေပါသည်။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:21:00 AM7comments
တစ်စုံတရာ ရယူဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး
ဘာပဲလုပ်လုပ် ပန်းကလေး ကြေနပ်တယ်..
မြေမှာချပြီး ခြွေနင်းချင် ခြွေနင်းလိုက်ပါ
နှစ်စဉ် အချိန်မီ တစ်ခေါက်
Posted by Nyein Chan Aung at 7:17:00 AM5comments
ရစ်ဘီးကြိုးက ပြတ်သွားတဲ့ စက္ကူစွန်တစ်ကောင်ဟာ
အချစ်က ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ရန်သူလို
အလစ်အငိုက် တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ အရာ
ငါ မစဉ်းစားပဲနဲ့ မင်းအကြောင်း ဘာကြောင့် အာရုံမှာ ရောက်ရောက်လာရတာလဲ
ငါမကြည့်ပဲနဲ့ မင်းမျက်နှာ ဘာလို့ မြင်မြင်နေရတာလဲ
ကြယ်တွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း ကြွေကျနေတယ်
ရွေးချယ်ခွင့်ဟာ အလှမွေးကန်ထဲက ငါးတစ်ကောင်လို အသက်ရှူကြပ်လို့
အနိုင်ရသူသာ မှန်ကန်သူအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်
အမိူက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်
ငါဘယ်တုံးကမှ ဒစ်ပလိုမေစီကို ရှေ့တန်းမတင်ခဲ့ဘူး
ငါမင်းကို သတိမရဘူးလို့ လိမ်ညာမပြောချင်ဘူး
ညည မင်းနာမည် ယောင်ယောင် အော်မိမှာတောင်စိုးရတယ်
မင်းကြောင့် ငါ့အိပ်ချိန်တွေ နည်းသွားတယ်
မင်းကြောင့် ငါ့အာရုံတွေ ထွေပြားနေတယ်
မင်းကို ငါ နားလည်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါ အငိုက်မိတဲ့အခါ ငါ့အသံမှာ ငါ့စိတ်ကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်
အသံမထွက်ပဲ ငါဆိုညဉ်းနေတဲ့သီချင်းဟာ လွမ်းတေးတစ်ပုဒ်ပဲ
ငါ ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့မြားက စိုက်ဝင်ဖို့နေရာ ရှာဖွေနေရဆဲ။ ။
Posted by Nyein Chan Aung at 8:35:00 AM5comments
ဟိုင်းဝေးလမ်းမမှာ တရိပ်ရိပ်ပြေးလွှားနေတဲ့ ကားတွေ
ရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတရာတော့ ရှိတန်ကောင်းရဲ့
ငါ့မှာ တောင်ပံက မရှိတော့
ဘယ်အရပ်ဒေသကိုမှ ခြေမဆန့် နိုင်ခဲ့ဘူး
ဖျားနာနေသူပါ .. ညီမလေး
အဆုပ်ထဲ မောကြီးပမ်းကြီး ရှူသွင်းနေခဲ့ရ
လေကောင်းလေသန့် မရှိတာ ဆိုးတယ်
တစ်စုံတယောက်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်
အလွယ်တကူနဲ့ တွယ်မိတွယ်ရာ တွယ်ညိတတ်ပါသလား
ကျနော်လည်း စမ်းတ၀ါးဝါး ခရီးဆက်နေဆဲ
Posted by Nyein Chan Aung at 12:32:00 PM7comments
သစ်ရွက်ပေါ် တင်ကျန်ရစ်သော မိုးရေစက်များ၏ စိတ်ကူး
မျက်လုံးထဲ ရွှေငါးတွေ မကူးခတ်တော့တာ ကြာပြီ
ကျနော့်ကို ခံစားချက် တစ်စုံတရာ မပေးနိုင်ကြ
မာနကြီးတဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်က အခုလိုကြုံးဝါးတယ်
ညံ့ဖျဉ်းတဲ့ တံငါသည်တွေရဲ့ အလုပ်ပဲလို့
တစ်ခုခုကို မရွေးချယ် ရသေးသ၍
တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ခွင့် ရှိနေသေးတယ်
ငါ့ ကန္တာရမှာ မိုးတွေသာခေါင်ခဲ့
ငါ့ ဥယာဉ်မှာ စိုစွတ်ခွင့်မရခဲ့
လမသာ လေမတိုး နှင်းမကျ ပန်းမပွင့်
ကန္တာရ ကိုင်းပင်တွေသာ ရင့်ရော်ကြမ်းတမ်းလာခဲ့..
အချိန်အကန့်အသတ် သတ်မှတ်ချက် မရှိဘူး
အချိန်ပို ကစားခွင့်လည်း မရှိဘူး
ရပ်နေတဲ့ မော်တော်ကား တစ်စင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မည်သည့်အရပ်ဒေသကို ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ
တစ်ခုခုကို အရသာ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်
ငါတို့ တန်ရာတန်ကြေးတော့ ရမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်…..။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:12:00 PM5comments
ကျနော်ကအေးဆေးပါပဲ ကောင်မလေးက မျက်နှာများတယ်
ရာဇ၀င်တွေထဲကလို ကြိုက်ရာလက်နက် ကိုယ်စီနဲ့
ကျနော်က လူမိုက်တွေကို စိန်ခေါ်ကြည့်မိတယ်
အခန်းထဲ လှောင်ပိတ်မိနေတဲ့ “လေ” နဲ့အတူ
“စိတ်” မှာ မလတ်ဆတ်တော့တဲ့ အနံ့အသက်တွေဟာ ကပ်ညိလို့
“ဒီရက်တွေထဲ နေထိုင်ရတာ မကောင်းဘူး
တိုက်လာတဲ့လေပြေကတောင် သူစိမ်းဆန်နေတယ်” တဲ့
ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ အနားယူနေတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်က ပြောတယ်
ဟောဒီမှာ ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီး
အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှ အတုံးအရုံး ကျရူံးနေတယ်
“လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေစေနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ
လူဆိုးတွေလက်ထဲ မရောက်အောင် ကာကွယ်ကြရမယ်” တဲ့
ဝေါထရိတ်စင်တာ ပြိုကျအပြီးမှာ ဂျော့ဒဘလျူဘွတ်ကပြောခဲ့တယ်
ကျနော်တို့တွေလည်း လူသတ်လက်နက်တွေပြပြီး အကြမ်းဖက်တာခံနေရ
အဲဒီကိစ္စကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေး ကြမှာလဲ
တစ်ခါတခါ အမြင်အာရုံတွေ မှောက်မှားသွားတယ်
ကမ္ဘာကြီး ဘယ်ကို သွားမှာလဲ ဘယ်အထိသွားမှာလဲ
ကျနော်က ရှေ့ကို လျှောက်နေပေမဲ့ ခြေလှမ်းတွေက
နောက်ကို ပြန်ရောက်နေသလို ခံစားနေရ
ဒါဝင်ကပြောတော့ “လူဆိုတာ မြောက်က ဆင်းသက်လာတာပါ” တဲ့
ကျောရိုးမဲ့ သတ္တ၀ါတွေကနေ ကျောရိုးရှိ ငါးသတ္တ၀ါတွေအထိ
လူတူမျောက်ဝံမှသည် အာကာသထဲ ဂြိုလ်တုတွေ လွှတ်တင်နိုင်တဲ့ ခေတ်အထိ
လူသားတွေ မီးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲ အရေးကြီးတာပဲ
မန်ယူနဲ့ ချဲဆီး ဖလားလုပွဲကလည်း အရေးကြီးတာပဲ
လူတွေကတော့ ကိုယ့်ကိစ္စသာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်နေကြတယ်
“ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ တော်သူနေ မတော်သူသေကြရမယ်” တဲ့
ဘောဂဗေဓ ပညာရှင်တစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားကို ကျနော်ကတော့ သဘောမပေါက်ဘူး
ခေတ်မီအောင်လည်း အားသွန်ခွန်စိုက် မကြိုးစားမိဘူး
ဒီအရွယ်အထိ ကာတွန်းကားတစ်ကား ပြီးအောင် မကြည့်ဖူးသေးဘူး
ကျနော်က “စီးချင်းထိုး” ချင်ပေမဲ့
ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လက်မခံတော့
ကျနော်က မင်းသား မဟုတ်ပေမဲ့
Posted by Nyein Chan Aung at 8:11:00 PM2comments
ငါတို့ နိုင်ငံကို ပြန်ပေးပ ဧရာဝတီ
“ဘမ်ကီမွန်းလာမှ အခြေအနေတွေက ပိုပြီးဆိုးသွားတယ်” တဲ့
ဝေးရာကို မောင်းထုတ် တောထုတ် ခြောက်လှန့်ထုတ်
မြို့ပေါ်က ဒုက္ခသည်တွေကို ရွာပျက်တွေဆီ အတင်းအကြပ်ပြန်ပို့
ရိုက်နှက် ကန်ကျောက် သေနတ်ပြ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ပြန်ပို့
“ခွက်စွဲတောင်းရမ်းတာ မင်းတို့အတွက် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့လုပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံတော် သိက္ခာကျရသတဲ့”
ဒုက္ခသည်တွေကို အစားအစာတွေပို့ပြီး ပြန်လာတဲ့
ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်ကားတွေကို လမ်းကနေဖြတ်ဖမ်း
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ သိက္ခာကျအောင် လုပ်တဲ့အတွက်
ကားသမားတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးရမယ် တဲ့…
သတင်းမှန်တွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ နားထောင်နိုင်ဖို့
ကျနော့်မှာ ကြံ့ခိုင်တဲ့ နှလုံးသားမရှိဘူး
တည်ကြည်တဲ့ သမာဓိ ကျနော့်မှာ မရှိခဲ့ဘူး….
နာဂစ်ကို သားသမီးမြေး (၁၂) ယောက် ပေးလိုက်ရတဲ့
အမယ်အိုတစ်ယောက်က အခုလို ဆုတောင်းခဲ့တယ်
နောင်ဘ၀ဆိုတာများ တကယ်သာ ရှိခဲ့ရင်….
ညနေ မှောင်ရီဖျိုးဖျ မိုးချုပ်တဲ့အခါ
ရေဒီယိုတွေကို နားထောင်ရမှာ ကြောက်နေမိတယ်
ဒီကောင်တွေ လူမှ ဟုတ်ရဲ့လား…
“လား” ပေါင်းများစွာနဲ့ နေ့တွေ.. ညတွေ ကုန်ဆုံးနေကြတယ်
ဧရာဝတီမှာတော့ အလောင်းတွေက နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေဆဲပဲ….
“ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အဆုံးသတ်သွားပါပြီ..” တဲ့
အိပ်စရာ နေစရာမရှိလို့ ကွင်းပြင်ထဲမှာ အမိုးအကာမရှိ နေကြရတယ်..
သောက်ရေတစ်ခွက်ရဖို့ ကလေးတွေ တန်းစီနေရတယ်..
ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေ ရောက်မလာခဲ့ကြဘူး..
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နူန်းဟာ အကူအညီတွေ မရကြသေးဘူး..
အစာရေစာမဲ့ ဒုက္ခသည်အများစုကြီးဟာ သေဆုံးမဲ့ အချိန်ကို
အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမတွေ ရင်ဘတ်ကို ထုထုပြီး ငိုနေကြ..
အံကိုတင်းတင်းကြိတ် လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ဆုပ်ပြီး မျက်ရည်တွေတွေကျ..
သပိတ်မသွတ်ရလို့ မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ တစ္ဆေ သူရဲတွေက
မိဘမဲ့သွားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပဲ
ပညာမဲ့ အသိညာဏ်မဲ့ အတွေးအခေါ်မဲ့တဲ့
ရမ်းကားတဲ့ နအဖ မုဒိမ်းတပ်က
လက်မရွံ့ စစ်သားလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်
ပြည့်တန်ဆာမကလေးတွေ ဖြစ်လာမဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်…..
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ လိုအပ်တယ်” တဲ့
အရှက်မရှိ အလွယ်တကူ ပြောထွက်တဲ့စကား
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဆိုက်ကပ်လာတဲ့ လေယာဉ် ၁၄၆ စင်းပေါ်က
ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဟာ ဒုက္ခသည်တွေဆီ ရောက်မလာခဲ့ကြ..
နိုင်ငံခြားသား ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေကို ဗီဇာထုတ်မပေးချင်လို့
ဘန်ကောက်သံရုံးကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မီးပြန်ရိူ့ကြ..
ထိုင်းရဲက ပြောတော့ ဗီဇာအဆောက်အဦးကို မီးမစွဲပါဘူးတဲ့
မြန်မာသံရုံးကပြောတော့ ဗီဇာဌာနကိုပါ မီးလောင်သွားသတဲ့…..
ငါ့ နိုင်ငံကို ပြန်ပေးပ
ငါတို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကြီးကို ပြန်ပေးပါ
ငါတို့ လယ်ယာမြေတွေ ငါတို့ကိုပြန်ပေးပါ
ငါတို့ ကျွဲနွားတွေ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ ပြန်ပေးပါ
ငါတို့ တောသူတောင်သား လယ်သမားတွေကို ပြန်ပေးပါ
ဆင်းရဲပေမဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ငါတို့ ဘ၀တွေကို ပြန်ပေးပါ
ထမင်းကြမ်းခဲကို ယပ်ခပ်ပြီးစားရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပြန်ပေးပါ….
တစ်ခါက ဧရာဝတီ ညတွေကို ပြန်ပေးပါ….
နာဂစ်က တစ်ဘ၀စာပဲ သတ်သွားခဲ့ပေမဲ့
ဘ၀အဆက်အဆက် သတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီ……။
Posted by Nyein Chan Aung at 12:16:00 AM4comments
အလောင်း ဒုက္ခသည် နဲ့
ကပ်ရောဂါ ပိုးမွှားတွေသာ ချန်ထားရစ်ခဲ့
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတွေကို အတိအကျရေးပြနိုင်ဖို့
မုန်တိုင်းမှာ မျက်စိမပါတော့ ပစ်မှတ်ဟာ လွဲချော်သွားခဲ့
အလွမ်းများ မျက်ရည်များ ရင်နာကြေကွဲဖွယ်ရာများ
ဖြေလို့ မပြေတဲ့ အပူမီးများ
“မုန်တိုင်းမှာလည်း အောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်” ဆိုတဲ့
သူ့ဆီမှာ အောက်ဆီဂျင်နည်းနည်းလောက် တောင်းမလို့
ပြီးတော့ “ဒုက္ခက ပျားရည်စက်လိုချိုသတဲ့”
အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တဲ့ လောကကြီး
လုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ အလုပ်ကို ငါတို့က မလုပ်ခဲ့လေတော့
အခုတော့ သေကြေကြ ပျက်စီးကြ ဆုံးရူံးကြရ။
R2P နဲ့ Airlift လုပ်ပါ
လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ အတည်ပြုချက် ရယူပါ
မြို့တော်သန့်ရှင်းရေးအတွက် လမ်းပေါ်ကခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို သုတ်သင်ရသလို
နေပြည်တော်က ခွေးဝဲစားတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ
နေပြည်တော်က တရားခံတွေကို အသေပစ်ပါ
မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ ရအောင်ဝင်ပါ
ငါတို့ မှာ နောက်ထပ်သေဆုံးစရာ အသက်တွေ မရှိတော့လို့
ငါတို့ တိုက်ပွဲမှာ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်နေပြီမို့
ငါတို့ တော်လှန်ရေး ခရီးပမ်းနေပြီမို့
ငါတို့ ပြည်သူတွေကို အချိန်မီ ကယ်တင်နိုင်ဖို့
ငါတို့ ပြည်သူတွေမှာ ဘီလူးသဘက်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ခွန်အားမရှိတော့လို့
နေပြည်တော်ကို အမြန်ဆုံး သိမ်းပိုက်ပါ
နေပြည်တော်ကို အမြန်ဆုံး ၀င်တိုက်ပါ
ငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံး ရင်ထဲက ဆန္ဒပါ
ငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားတောင့်တချက်ပါ
နအဖ ဒေါက်တိုင်တွေ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာမှာလား
ဒေါသထွက်နေတဲ့ အနောက်ကမ္ဘာက နေပြည်တော်ကို တကယ် ပစ်တော့မလား
အပြင်ဘက်မှာတော့ နာဂစ် မုန်တိုင်းကစဲသွားပြီ
ငါတို့ ရင်ထဲမှာ သောက မုန်တိုင်းတွေ အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ခတ်နေဆဲ။
Posted by Nyein Chan Aung at 2:13:00 PM3comments
ငါ့ရင်ဘတ်ကို နာဂစ်လိူင်းတွေ တ၀ုန်းဝုန်းလာဆောင့်တယ်
ရေကျသွားတဲ့ လယ်ကွင်း တွေထဲမှာ တုံးလုံးပက်လက်
ကွင်းပြင်က ပုတ်ပွနေတဲ့ အလောင်းတွေကို ကုန်းသတ္တ၀ါတွေကစားတယ်
မြစ်ချောင်းတွေထဲက ပုတ်ပွနေတဲ့ အလောင်းတွေကို ငါးတွေကစားတယ်
တမျှော်တခေါ် မြင်းကွင်းတစ်ခုလုံး အနိန္ဓာရုံသက်သက်ပဲ။
ငါ့အာရုံအားလုံးကို “ရီဖရယ်ဒမ်မဲလိမ်ပွဲ” ဆိုတဲ့ မုန်တိုင်းက တဒိုင်းဒိုင်းလာဆောင့်တယ်
လူတွေကို သေနတ်ထောက်ပြီး ထောက်ခံမဲပေးခိုင်းတယ်
၉၀ ရာခိုင်နူန်း ပလပ် ထောက်ခံပါတယ်လို့
ပြည်တွင်းကလာတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေက ညွှန်ပြနေကြတယ်
ငါ့စိတ်အပေါ်ကို အဆောက်အဦးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြိုကျနေတယ်
ခဏကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ငါအတိတ်မေ့ရောဂါ ရဖို့လိုအပ်နေတယ်။
တစ္ဆေသရဲတွေနေတဲ့ ကျွန်းကလေး တစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေတယ်
ငါ့ဘေးနားမှာ အစာရေစာမရလို့ သေအံ့ဆဲဆဲ လူမမာတွေ ညည်းနေကြတယ်
မြေမမြှုပ်ရသေးတဲ့ အလောင်းတွေလည်း ပြန့်ကျဲလို့
ဒီကနေ့ ငါ့မွေးနေ့မှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ ကမ္ဘာမြေကို ဂုဏ်ပြုရမယ်
ပြီးရင် ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ မွေးနေ့ပွဲကို တိတ်တဆိတ်ကျင်းပဖို့လုပ်ရမယ်
ငါ့နိုင်ငံက နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် တစ္ဆေသူရဲ ဖြစ်သွားသူတွေ
ငါ့မွေးနေ့ကို တိတ်တဆိတ်လာရောက် ချီးမြင့်ကြတာပဲ
သူတို့မျက်နှာတွေမှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးမှုအတွက်
မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ သူတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်က
အမြန်ဆုံး ကျွတ်လွတ်ခွင့်ရခြင်းဟာ နိဗ္ပာန်ရောက်ခြင်းပဲဆိုတာ
လူတွေက မွေးနေ့ကိုသာ သတိရပြီး
သေ မဲ့နေ့ကို မေ့နေကြတယ်
ငါ့လူငယ်ဘ၀ဟာ ကျနေလိုပဲ ရုတ်ခနဲ ကုန်ဆုံးသွားတယ်
ငါ့နုနယ်ပျိုမျစ်ခြင်းဟာ အမိမြေနဲ့ ဝေးရာ တိုင်းတပါးမှာ ကုန်ဆုံးသွားတယ်
ဒီနေ့ငါ့မွေးနေ့မှာ ဘာစကားမှ လက်ဆောင်ပါးစရာလည်းမရှိပါဘူး
လူတွေဟာ သေဆုံးဖို့ အတွက်ရှင်သန်နေကြတယ်
စိတ်ဓါတ်ကို မြေကြီးထဲအထိ နှိမ့်ချကြည့်လိုက်တယ်
စိတ်ဓါတ်ကို မိုးပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ကြည့်လိုက်တယ်
ငါ့စိတ်နဲ့ ငါ့ခန္ဒာကိုယ်က သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်နေသားပဲ
တိမ်တွေကလည်း တောက်လို့ ပလို့
မြက်ခင်းပြင်တွေကလည်း စိမ်းလို့ လန်းလို့
ဟော.. အရှေ့ဆီမှာ ရောင်နီပျို့လာပြီ
သီအိုရီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မုန်တိုင်းစဲရင် လေပြေညှင်းလာစမြဲပဲ။
Posted by Nyein Chan Aung at 1:49:00 PM5comments
အရေပြား မွဲခြောက်ခြောက် လူမမာရုပ်ပေါက်နေတဲ့
လက်ထဲမှာ ဟင်းချက်စရာ တိုလီမုတ်စ ပစ္စည်းတွေ ဆွဲလို့
ကလေးတွေ လက်ကို ဆွဲလို့
စက်ရုံဆင်းချိန် ညနေခင်းဈေးတစ်ခုက ပြန်လာကြတဲ့
မြန်မာပြည်သား (၁.၇) သန်းကို ထမ်းပိုးထားရတဲ့
မြန်မာဆိုရင် နှာခေါင်းရှုံ့တတ်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ
ဈေးသည်က ဖောက်သည်ကို ငတ်သလို
အလိုမတူပဲ ဇိမ်ခန်းမှာ ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့
တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမား ကလေးငယ်တွေရှိတယ်
မြန်မာတွေရဲ့ အမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပုဂ္ဂလ္လိကမာနဟာ
ဘ၀ဟာ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ အနိန္ဓာရုံပဲ
ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ ၀ီစကီ ပုလင်းတစ်လုံး မဟုတ်ဘူး
ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အတိတ်ဘ၀ မဟုတ်ဘူး
ဖုန်ထူပြီး ဗွက်ပေါတဲ့ ငါ့မွေးရပ်ဒေသ မြေလတ်က မြို့ကလေးမဟုတ်ဘူး
တကယ်တော့ ငါလွမ်းနေမိတာ သေချာလှတယ်မဟုတ်ပေမဲ့
မငိုပဲနဲ့ လူတွေဟာ ဘာကြောင့် မျက်ရည်ကျရတာလဲ
မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်က ထွက်တဲ့
နံစော်တဲ့ ချွေးနံ့တွေထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတယ်
သူတို့နိုင်ငံသားတွေဆီကရတဲ့ အကောင်းစားရေမွှေးဆွတ်ထားတဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့မှာ
ခေါင်းပုံဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ တရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်အားခတွေရှိတယ်
ဆန္ဒနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ဟာ တစ်ထပ်တည်းဘယ်တော့ ကျမှာတဲ့လဲ
လူအများနဲ့ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ရေငုံနူတ်ပိတ်နေရမလားငါစဉ်းစား
ဒီထက်ပိုကောင်းတာမရှိလို့ ရှိတာကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ရ
ဖြစ်သင့်ပေမဲ့ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ဒီလိုပဲ ဖြေသိမ့်နေရ
တကယ်တော့ ရှင်သန်းခြင်းဆိုတာ မမြင်ရတဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ
ငါ့မျက်လုံးတွေက မိုးရွာထဲကို ဆက်ငေးကြည့်နေဆဲ
ငါ့ကို စိတ်တိုင်းမကျတော့တဲ့ ငါ့ကိုယ်စောင့်နတ်ဟာ စိတ်ကောက်ပြီး
28 April, 2008 – 6:30 PM
Posted by Nyein Chan Aung at 4:05:00 PM3comments
အချစ်နဲ့ အမုန်းသာ မရှိတော့ရင်
ပျားရည်ဆမ်းမထားတဲ့ မွဲခြောက်ခြောက် အထီးကျန်နေ့ရက်တွေ
ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆုံမိတဲ့အခါတိုင်း
အကြောင်းပြချက် ရေရေရာရာ မရှိပေမဲ့
ယနေ့တိုင် လူပျိုဘ၀ကို ခုံမင်နေမိဆဲ။
ရေသောက်မြစ် အဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်လိုပဲ။
မနက်ဖြန်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကြိုတင်မမြင်ရတဲ့ အရာ
ပါးစပ်က ထွက်ကျလာတဲ့ စကားတစ်ခွန်းအတွက်
မိုက်သွေးတွေ ကြွပြနေဖို့ မလိုအပ်ပေမဲ့
လွယ်လင့်တကူနဲ့တော့ သိမ်းပိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by Nyein Chan Aung at 4:45:00 PM3comments
အသံမထွက်ပဲနဲ့ သားကောင်ရဲ့ ချက်ကောင်းကို ထိအောင် ပစ်ချနိုင်တယ်
မင်းက မင်းရှင်သန်ကြီးထွားရာ ပတ်ဝန်းကျင် စေ့ဆော်မှုအတိုင်း
မင်းနှလုံးသားက လျှပ်စစ်ဓါတ်မကူးတော့တဲ့ ၀ါယာကြိုးခွေအပျက်
အဲဒီနှလုံးသားက ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း ခံစားချက်မရှိဘူး
ခေတ်မီတယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ မင်းဟာ
နောက်ဆုံးပေါ် အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ မင်းကိုယ်ခန္ဒာ
နောက်ဆုံးပေါ် အတွေးအခေါ်တွေ တပ်ဆင်မထားခဲ့
ငါတို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေး အကြောင်းအရာ
မင်းအာရုံမှာ စက္ကန့်ပိုင်းကလေးတောင်မှ အရိပ်ထင်ပုံ မရဘူး
ဆေးဆိုးထားတဲ့ လက်သည်းတွေကို ဖြန့်ခင်းလို့
နူတ်ခမ်းဆိုးဆေးတောင့်နဲ့ အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းလှလှတွေအကြောင်း
ပြီးတော့ အမဲကောင်တွေကို အချဉ်ဖမ်းဖို့အကြောင်း
ယဉ်ကျေးမှု အရောင်အသွေးတွေ ကွဲပြားခြားနားတတ်တဲ့အကြောင်း။
ကျားစာဖြစ်သွားတဲ့ မုဆိုး တွေအကြောင်းနဲ့
ငါးစာ ဖြစ်သွားတဲ့ တံငါ တွေအကြောင်းလည်း
မင်းမျက်နှာ၊ မင်းကိုယ်ခန္ဒာ “ပေါင်းတင်” သလို
မင်းဦးဏှောက်နဲ့ မင်းနှလုံးသားမှာ ကပ်ညိနေတဲ့ “ချေးညှော်” တွေကို ချွတ်ဆေးနဲ့ချွတ်ပြီး
မင်း “မာယာ” မှာ “သားကောင်ရှာရေဒါ” တပ်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း။
16 April 2008 - Evening
Posted by Nyein Chan Aung at 11:12:00 PM7comments
ဘာလက်နက်မှ မရှိရင်တော့ ခံရတော့တာပဲ
ကြိုးစားရင် ဘုရားတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ
ရီစရာ အကောင်းဆုံး ပျက်လုံးတစ်ခုသာပဲ။
ရူံးပွဲနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
သိက္ခာနဲ့သီလကို ချရောင်းတာ ၀ယ်မဲ့ သူမရှိဘူး
လူတွေက ကျော်ကြားမှုနောက်ကို လိုက်တယ်
ငွေများများရှိတဲ့ နေရာကို ငွေတွေလိုက်တယ်
ငွေမရှိတဲ့ နေရာကို ဘာငွေမှမလာဘူး
ခန္ဒာကိုယ်ပဲရှိလို့ ဒီခန္ဒာကိုယ်ပဲ ရောင်းစားရတော့တာပေါ့
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကြုံသလို ရှင်သန်တယ်
မနက်ဖြန်ကတော့ ကံစီမံတဲ့ အတိုင်းပဲ။
နောင်ဘ၀က ငရဲကို တွေးကြောက်နေမှာ မဟုတ်တော့။
Posted by Nyein Chan Aung at 9:34:00 AM5comments
“ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခွဲထည့်ထားလို့ ရရင် ထားလိုက်ချင်တယ်” တဲ့
မင်းရဲ့ နူတ်ခမ်းပါးကလေးက တစ်ဆင့်
မင်းရဲ့ အဇ္ဇတ္တကို ငါရှာဖွေတတ်ခဲ့ပါပြီ
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ငါ့ သက္ကရာဇ်တွေကို နှမြောတယ်
ဧရာဝတီကို မင်းချစ်သလို ငါလည်း ချစ်တယ်
မြန်မာပြည်ကြီးကို မင်းလည်း ချစ်တယ် ငါလည်း ချစ်တယ်
အချစ်ဆိုတာ ကောက်ရိုးမီးတောက်သလို ထ, ထ တောက်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး
မြန်မာပြည် ခပ်ညံ့ညံ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ရိုးရိုးလက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်လိုပဲ
လူတွေရင်ဘတ်ထဲက အချစ်တွေ ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်သွားတာ မင်းလက်ခံလိုက်ပါ။
သင်္ကြန် လက်ဆေးမိုး ရွာမှ
စကားလုံးတွေ ငါ့အာရုံထဲ ပစ်ပစ် မထည့်ပါနဲ့
အခုမှ ရေတွင်းတူးပြီး အခုချက်ခြင်း ရေကြည်သောက်လို့ မရပါဘူး။
တောအုပ်ကြောင့် ပုတ်သင်ညိုတွေ အရောင်ပြောင်းတတ်တယ်
မင်းကတော့ ရာသီအပြောင်းမှာ ၀တ်စုံ မကြာခဏ ပြောင်းဝတ်ခဲ့
ရာသီစာ သီးပင်တွေ မင်းက မကြာမကြာ စိုက်ပျိုး
မင်းစိုက်တဲ့ သီးပင်တွေက တစ်ရာသီစာပဲ ခံလေတော့
မီးစင်ကြည့်ကတတ်တဲ့ မင်းရဲ့ မူဝါဒကို ရပ်လိုက်ပါတော့။
နားလည်အောင် ဖတ်ဖို့ ပရိုဂရမ်ဆော့ဝဲလ် မရှိသေးဘူး။
Posted by Nyein Chan Aung at 11:52:00 AM 10 comments
မြန်မာပြည်တွင်းက ဂီတအနုပညာရှင်များရဲ့ ရွှေဝါရောင်စက်တင်ဘာတေးဂီတအဖွဲ့၏ ဒုတိယခြေလှမ်းအဖြစ် “မဲရုံဆီသို့ ကန့်ကွက်စို့” အမည်ရ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်တေးသီချင်း (၂) ပုဒ်ကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ မိုးမခ မီဒီယာမှ တဆင့်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ အောက်ကလခ့်တွေမှာ နားဆင်ပါ။
၁။ မဲရုံဆီသို့ ကန့်ကွက်စို့
၂။ တောင်ပေါ်မြေပြန့် ကန့်ကွက်ကြမယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 1:42:00 PM2comments
တစ်နှစ်ခင်းလုံး ဇွဲခတ်ပြီး အောင့်ထားရပုံမျိုးနဲ့
ချစ်ခြင်းနဲ့ ပွင့်လာတဲ့ ပန်းတွေ
ရောက်လာတဲ့ အို.. ပိတောက်ဝါ
တန်ခူးလေနဲ့ မြူးဖို့ ၀ါဝါထိန် တောက်ခဲ့တာလား
ရှာပုံတော်အလွမ်းဇာတ်ကို တစ်ခန်းရပ်ဖို့ လာလေသလား
ဖော်ဝေးသူကို မျှော်ငေးပူဆွေးဖို့ ရောက်လာကြတာများလား။
သွေဖည်တိမ်းကာ စိမ်းပါသလား အချစ်ရယ်
ဟောဒီမှာ … နွေဦး
ဟောဒီမှာ … ဧပရာယ်ဖူး
ဟောဒီမှာ … ပိတောက်ဦးတွေ
ချိုမြိန်တဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ရှိမှာ
လူ့ဘ၀ ရခဲလှ ခဏတာမှာ
အချစ်ဦးမို့ မေ့လို့မရပါ ချစ်သော ပိတောက်ဝါ။
လွမ်းရေးထက် ၀မ်းရေးခက်တဲ့ ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲ
ပိတောက်ပျိုအ၀ါကို ခူးဆွတ်ကာ ပန်ဆင်ပေးလိုပေမဲ့
ဆယ်မိုးဆယ်နွေ ရှည်ကျော်ခဲ့ အလွမ်းရက်ရှည်ခရီးထဲ
Posted by Nyein Chan Aung at 9:24:00 AM 11 comments
အိပ်မရလို့ စဉ်းစားနေမိတာ မဟုတ်ဘူး
လပြည့်ညမှာ အတောက်ပဆုံးကြယ်တစ်ပွင့်ကို လိုက်ရှာနေမိသလိုမျိုး
ညက အမြင်အာရုံကို အလှနဲ့ လှည့်စားနိုင်တယ်။
ကွန်ပြူတာမှာ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလို အိုဗာဖြစ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး
တွက်မိတဲ့ ပုစ္ဆာအားလုံးမှာ အဖြေက တစ်ခုပဲထွက်ခဲ့တယ်။
အသက်ချင်းထပ်ထားရတဲ့ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း ကစားပွဲတွေမှာတော့
သရီးဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဟောလိဝုဒ် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလို
အက်ဆစ်မိုးတွေ ကွက်ကြားရွာချပေးနေတဲ့ ဟောဒီမိုးကောင်းကင်အောက်မှာ
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က လူငယ်တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က လူငယ်တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က လူငယ်တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်
လူငယ်တွေ တရားခံအစစ်ကို ရှာတွေ့ပါတယ်....
လူငယ်တွေ ပြိုင်တူတွန်းနိုင်မဲ့ ရက်ကိုစောင့်နေဆဲ.....
လူငယ်တွေရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်ဟာ မြူတွေလိုေ၀၀ါးနေမြဲ။
ထောင်နံရံတွေကနေ ပဲ့တင်ထပ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်
“ဘယ်တော့မှ ဒူးထောက် အညံ့ခံမှာ မဟုတ်ဘူး” တဲ့
သူရဲကောင်းသွေးဟာ အနီရောင်အလံတစ်ခုအဖြစ် ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တလူလူလွှင့်နေတယ်။
ကွယ်သွားတဲ့ အမြင်အာရုံနဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဦးဏှောက်တွေကို စာအုပ်ထဲမှာချရေးထားတယ်။
၀ိညာဉ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့ မြို့တော်မှာ တစ္ဆေကြောက်စရာတောင် မလိုတော့ဘူး။
လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားကြရင် ကောင်းမှာပဲ
လမ်းဘေးက ခွေးလေလွင့်တစ်ကောင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာနာစိတ်ထားပါ။
ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ရဲ့ စံနန်းဂူဝကို ပိတ်ဖုံးထားတဲ့ သေမင်းနံရံ တံတိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
တိုတောင်းလှတဲ့ ဘ၀မှာ လမ်းပေါ်မှာ ပိတ်နေတဲ့ အမိူက်တွေကို ရှင်းလိုက်ပါ
အလှတရားတွေကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားပစ်ပါ
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာ ခေတ်က သင့်ပခုန်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ တာဝန်ကို
လမ်းဘေးမှာ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်တောင်မှ တတ်နိုင်သလောက်
လောကကို အလှဆင်ပါတယ်။ ။
မတ် ၂၆ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၆) လပြည့်အတွက် ရည်စူးရေးဖွဲ့သည်။
Posted by Nyein Chan Aung at 11:19:00 PM9comments
စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ရှိတဲ့အတိုင်း လက်တုန့်ပြန်မိတော့
နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် အရေထူဖို့ အရင်ကြိုးစားလိုက်ပါဦး ညီလေးရာတဲ့
ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုတာကို ခံရတယ်
လမ်းပေါ်မှာခလုတ်တိုက်မိရင် တိုက်မိတဲ့အရာဝတ္တူ ခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကန်လိုက်တယ်
လမ်းသွားရင်း ဟောင်တဲ့ခွေးကို ခဲနဲ့ကောက်ထုတယ်
မကျေနပ်တာကို မကျေနပ်ဘူးကွလို့ ဗြောင်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်
ရွှေပြည်အေးတရားဟောနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ ထွေးချင်တယ်
သူပုန်ထတာ အချိန်နေရာဒေသ ရွေးနေစရာမလိုဘူး
ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ နိုင်နိုင် အနိုင်ရလိုစိတ် ငယ်ငယ်ကထားခဲ့ဖူးတယ်
ရန်သူကို ရန်သူလို မမြင်မိတဲ့နေ့ကစပြီး ခံရတော့တာပဲ
အိပ်မက်ထဲမှာ ယောင်ယောင်ပြီး ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေ
ကိုယ်ခံပညာ နည်းနည်းပါးပါး သင်ထားတယ်
လူရှေ့မှာ ဆွေးနွေးလို့ ရအောင် စာတိုပေစတွေ မတောက်တခေါက် ဖတ်ထားတယ်
မူးမှပဲ အော်အော် ဆဲလို့ကောင်းတော့ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း မူးမိတာပေါ့
မူးတိုင်းလည်း နံရံကို လက်သီးနဲ့ ပစ်ပစ်ထိုးလိုက်တယ်
ရွေးချယ်စရာ မတွေ့လို့ ဘာကိုမှ မရွေးချယ်မိသေးတာပါ
ခြေမတွေ့လို့ စောစောစီးစီး ထွက်ထိုင်နေမိတာ
Posted by Nyein Chan Aung at 1:11:00 PM6comments
မတ် ၁၃ အသားကင်ဆိုင် နွေဦးညနေခင်း
အလိုမတူပဲ လမင်းကို ငါ ချစ်တင်းနှောခဲ့မိတာ
နွေဦးက ရူးလောက်အောင် ဖမ်းစား
အဝေးက ငါစောင့်မျှော်နေခဲ့ ရောက်လာလတ္တံ့သော အ၀ါရောင်အလင်းတစ်စ
ငါ့ ခန္ဒာကိုယ်က နာကျင်ခြင်းမဲ့ အိုကြီးအိုမ ၀ိညာဉ်တစ်စ
လေထဲမှာ တဖျတ်ဖျတ်လွင့်လို့ ပေါင်းဖက်မွေ့ကြ
အဲဒီတဒင်္ဂမှာ ညက ငါ့ကို ပျားရည်နဲ့ ၀မ်းချခဲ့။
သူကလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေပဲ တဖျတ်ဖျတ်တောက်ပလို့နေကြ
သူစိမ်းဆန်ပေမဲ့ ယဉ်ကျေးပြူငှာတဲ့ ရေမွှေးရနံ့သင်းပျံ့ပျံ့ကလေး
ရင်ထဲအထိ တိုးလျှိုးပေါက် ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်
အဖွင့်အပိတ်မြန်ပြီး အလိုမကျတဲ့ စကားတွေပြောတတ်တဲ့ နူတ်ခမ်းပါးကလေး
ငါ သတိလက်လွတ် ငေးကြည့်နေမိတဲ့အရာ
သူကလေးရဲ့ ဆေးရောင်စုံခြယ်သ လှပတဲ့မျက်နှာ
တပ်မက်စိတ်ဟာ မီးတစ်စလို ရင်ကိုလောင်မြိုက်
နှလုံးသားဟာ ပရမ်းပတာ မြူးတူးခုန်ပေါက်လို့
ရေခဲစိမ်ပန်းသီးကို ခွဲစိတ်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူးကွာ
ဖမ်းဆုပ်ဖို့ ခက်တဲ့ အဲဒီ အလင်းတစ်စကိုပဲ
အငမ်းမရ ငါဟာ ဖမ်းဆုပ်
အချစ်က ရင်ဘတ်ထဲအထိ ၀င်ကြည့်မှ မြင်ရတဲ့ အရာမျိုး
အလွမ်းဆိုတာ အလင်းထက် ပိုမြန်တတ်သလား
သူပုန်ဆန်နေကျ ကိုယ့်ဝိညာဉ်ဟာ အခုထိ ကိုယ့်ဆီ ပန်ရောက်မလာတော့။
Posted by Nyein Chan Aung at 9:44:00 PM4comments
လောင်မြိုက်နေတဲ့ မီးတွေကို မတားနိုင် မဆီးနိုင်
“ငဲ့ညှာမှုနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်” ရှိမှ မီးရှိန်တွေ လျှော့ကျမယ်
မီးအမှောင်တိုက်တွေ ပိတ်ဖုံးနေမှဖြင့် စုံလုံးကန်းတော့တာပဲ
မီးပြင်းထိုးနေတဲ့ “ထင်း” မျိုးတွေပေါ့။
မီးတွေ မီးတွေ ပူလောင်လှချေရဲ့
မင်းရဲ့အလှဟာလည်း မီးပါပဲ အချစ်ရယ်
“ငါ ဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်အစွဲ” ဟာလည်း မီးပါပဲ
“အနိုင်ရလိုမှုနဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုစိတ်” ဟာလည်း မီးတွေပဲ
“လိုချင်တပ်မက်မှုနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုစိတ်” ဟာလည်း မီးတွေပေါ့
“မနာလိုဝန်တိုမစ္ဆိယစိတ်” ဟာ မီးလိုလောင်မြိုက်
အဲဒီ မီးတွေဟာ ဖောက်ပြန်ရူးသွပ်စေတယ်
တင်းတိမ်ရောင့်ရဲစိတ် မရှိသေးသ၍ မီးတွေဆက်လောင်နေဦးမယ်။
အချစ်ရေ မင်းကို ချစ်မိတာလည်း မီးပါပဲ
အချစ်က မီးတစ်စလို အပူတိုက်သွင်းနိုင်ရဲ့
မင်းရဲ့ အမုန်းဟာလည်း မီးပါပဲ
မင်းအမုန်းကြောင့် ငါ့ရင်မှာ ပူလောင်လှချည်ရဲ့။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကပ်ရောဂါတွေဟာလည်း မငြိမ်းနိုင်တဲ့ မီးတွေပဲပေါ့ကွယ်။
လောင်မြိုက်နေတဲ့ မီးတွေ မီးတွေ
အဲဒီမီးတွေကြောင့် စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့
အဲဒီမီးတွေကြောင့် အိုဇုန်းလွှာကြီး ပါးခဲ့
အဲဒီမီးတွေကြောင့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့သီလတွေ ကျိုးပေါက်ခဲ့
အဲဒီမီးတွေကြောင့် အလိမ်အညာအဖျီးအဖြန်းနဲ့မသမာမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့
အဲဒီမီးတွေကြောင့် ခိုးဆိုးလုယက်မှုနဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့
အဲဒီမီးတွေဟာ အာဏာရှင်နဲ့ ရာဇ၀တ်သားတွေကို မွေးထုတ်ပြန်တယ်
အဲဒီမီးတွေဟာ စိတ်ဖောက်ပြန်သူတွေနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေကို မွေးဖွားပေးခဲ့
အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလည်း မီးတွေပေါ့
၀ါဒမှိုင်း လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုနဲ့ ဘာသာရေးအစွဲ စစ်ပွဲ တွေဟာလည်း မီးတွေပဲပေါ့ကွယ်။
အချစ်ရေ မေတ္တာရေစင်နဲ့ မီးတွေကို ငြိမ်းသတ်ပါ
မင်း အမုန်းကြောင့် ပူလောင်လှချေရဲ့
အချစ်ရေ မီးလောင်ရာ လေမပင့်လိုက်ပါနဲ့
မီးပြင်းထိုး လောင်တိုက် သွင်းသူတွေကြောင့်
မငြိမ်းသော မီးတွေ မီးတွေ စကြ၀ဠာအနှံ့ လောင်မြိုက်နေခဲ့ပြီ...........။
Posted by Nyein Chan Aung at 5:30:00 PM3comments
မသေချာ မရေရာတဲ့ သက္ကရာဇ်တွေထဲ
“လုပ်သမျှ” ကို မယုံရဲ
“ပြောသမျှ” ကို သံသယစိတ်အစွဲနဲ့
အတိအကျ ရှိသမျှ ကြေငြာပေးမယ်လို့
ပလီပလာ ပေါက်ကရ လေကန်ပြီး
ကျောမွဲ မျက်နှာမွဲ အလှမွဲ အခြေအနေမှာ
ညဉ့် မနက်နိုင်တော့ပါဘူး အချစ်ရယ်။
ထူးပြီး စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့ အချစ်ရယ်။
နုငယ်လွန်းတဲ့ အသီးနဲ့လည်း မကစားနဲ့
အခြေအနေကိုခြုံငုံ တွက်ချက်ပြီးမှ စစ်ထွက်ရသလို
အသေအချာ ဆန်းစစ်ပြီးမှ ဈေးဝယ်ပါ အချစ်ရယ်။
သွေးနဲ့ရေးတော့ သွေးသမိုင်း ပေါ့ကွယ်
ငွေထိုးရင် ငွေရမယ်” ဆိုတဲ့
လောင်းကစားဝိုင်းက “ဒိုင်လူကြီး” ပြောတဲ့ စကား
ဆစ်တို ပုကွ လူလုံးမလှတဲ့
ခက် ခက်ရချည်သေးရဲ့ အချစ်ရယ်။
မဲရုံကို ဒို့တတွေ သွားလို့
“ကန့်ကွက်မဲ” ကလေး ပေးလိုက် ကြပါဦးစို့ကွာ….။
Posted by Nyein Chan Aung at 6:11:00 PM6comments
ဂီတစာဆို ကိုသက်ဦးရဲ့ ဒေ၀စ္ဆရာ သီချင်းထဲကလို
“ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် နတ်သွင်မူယာ ”
မင်းမျက်နှာလေးကို ကိုယ်ဟာ အားပါးတရ ငေးကြည့်
စွဲမက်ဖွယ် မင်းခန္ဒာကိုယ်အလှမှာ ရင်ခုန်တွယ်ငြိ
ငါ့ အပါးကနေ မင်း အပြီးတိုင် ပျောက်ဆုံးသွားတော့မှာ
ငါ့ရင်မှာ ဆွတ်ကြင် လွမ်းစိတ်ဝင်မိပါရဲ့
ကချေသည် ဒေ၀ီ မင်းသမီးလေးရေ....။
ကိုယ်ဟာ မင်းအပါးမှာ နေခွင့်မရှိသူပါ
ကိုယ်ဟာ အပြောကောင်းတဲ့ မင်းသားကြီး ဦးဖိုးစိန်မဟုတ်သလို
ရွှေမန်းတင်မောင်လိုလဲ အဆိုကောင်းသူ မဟုတ်ပါ
ခြေထိုးကောင်းတဲ့ ဦးအောင်မောင်းကြီးလိုလည်း မင်းကျအောင် ကမပြတတ်ပါ မင်းသမီးလေးရေ
ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ့ ပရိသတ်များစွာထဲက တစ်ယောက်သာမို့
အချိန်တန်တဲ့အခါ တို့တွေ ခွဲကြရပြန်အုံးတော့မှာ
မိုးမလင်းခင် အချိန်လေးမှာ ကြိုးစားပြီးကလိုက်ပါအုံး
မင်းရဲ့ ကောင်းခြင်းငါးဖြာ အလှမှာ
မျက်နက်ဝန်းတွေ ဒေါင့်ကပ်လို့ ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါ
သောက်ရှူးကြယ်အလား ရွှန်းရွှန်းစားစား မင့်အပြုံးတွေနဲ့
ကြီးတောင့်ကြီးမား ဒီကောင့်နှလုံးသားကို ညှို့ယူဖမ်းစားပါ
ဟောလိဝုဒ်က မိန်းမချောတွေကို ကိုယ်မတပ်မက်ပါဘူး
ခန္ဒာကိုယ်ဖွံ့ထွားတဲ့ ဘောလိဝုဒ် မင်းသမီးတွေကို ကိုယ်မလိုချင်ပါဘူး
အာရှပဂေး ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေရဲ့ အလှမှာလည်း ကိုယ်မကျရှုံးချင်ဘူး
ကိုယ့်နှလုံးသားက မင်းကိုပဲ လိုအပ်မိလို့
ကိုယ့်ညခင်းတွေမှာ မင်းရှိမှ ပြည့်စုံမှာမို့
ကိုယ်ဟာ မင်းအနုပညာကို တန်ဖိုးထားမိသူမို့
မင့်အပြုံးမှာ ကိုယ်ဟာ ရင်ခုန်မိလို့
ကြယ်စင်တွေရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ အတူ
နေ့အချိန် အလင်းရောင်ထဲမှာလည်း မင်းအရိပ်ကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေမိအုံးမှာ
ကိုယ်ဟာ မင်းကို ချစ်ခဲ့မိလို့ပါ မောင့်ကချေသည် ဒေ၀ီ မင်းသမီးလေးရေ.....။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:25:00 PM6comments
ငါ ချစ်မက်တဲ့ နှင်းဆီ
တောတောင် အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး
ကိုယ်ဟာ မွတ်သိပ်စွာ ဆာလောင်နေသူပါ
ကိုယ့်မှာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေရှိတယ်
ကိုယ့်မှာ မြဲမြံတဲ့ ခွန်အားတွေရှိတယ်
မင်းရဲ့ ပွင့်လင်း လွတ်လပ်မူမှာ
သဘာဝအတိုင်း မဖုံးမကွယ် ပွင့်လင်းစေခဲ့
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို လိုအပ်နေတဲ့အထိ
ခိုင်မာမြဲမြံတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဇွဲစိတ်ထက်သန်မှုနဲ့
မမောနိုင်မပမ်းနိုင် အချစ်နေ့တွေ ညတွေကို
ပင်လယ်ကို လှေငယ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်ရသလို
တောလမ်းခရီးကြမ်းကို တောစီးဖိနပ်မပါပဲ ဖြတ်သန်းရသလို
ပင်လယ်ဆားငန်ရေသောက်ပြီး အငမ်းမရ ရေငတ်ဆာလောင်
ကိုယ့်ရဲ့ အထီးကျန်မှု နှစ်တစ်ရာလွင်ပြင်ကို
ထာဝရ မိုးခေါင်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကန္တာရမှာ
မင်းရဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ အနမ်းတွေနဲ့
မိုးတွေကြီး ရေတွေလျှံစေရမယ် အချစ်ရယ်..။
မင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပြီးမြောက်မှုပါ
ပွင့်လင်း ရိုးရှင်းမှုကို ကိုယ်ကချစ်တယ်။
မင်းဟာ ကိုယ်နမ်းလို့မ၀တဲ့ နှင်းဆီ
မင်းဟာ ကိုယ်ငတ်မပြေတဲ့ ၀တ်ရည်ပေါ့။
အချစ်မှာ ရှက်ကြောက်နေသူတွေကို ထားရစ်ခဲ့မယ်
မင်းရဲ့ ဆန္ဒ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေအပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်း
ရူးသွပ်မိုက်မဲစွာ မင်းကိုတပ်မက်မိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာ
Posted by Nyein Chan Aung at 12:12:00 PM7comments
Posted by Nyein Chan Aung at 10:58:00 AM5comments
၂၀၀၈ နှစ်ဦး အစီရင်ခံစာ
ဒါ.. ကိုထင်ကျော် စလိုက်တဲ့ မီးပွား
ဒါ.. ကိုမင်းကိုနိုင်ရိူ့လိုက်တဲ့ မီးတုတ်
ဒါဟာ.. သံဃာတွေဦးဆောင်တဲ့ တော်လှန်ရေး
ရွှေဝါရောင် အရေးတော်ပုံဟေ့ ။
တစ်ဖန်ရှင်သန် နိုးထလာခဲ့ရပြန် ။
ကမ္ဘာကြေတောင် ဥဒါန်းမကြေတဲ့ပွဲ ။
ပြီး.. အသစ်ရေးဖို့ အသင့် စောင့်နေခဲ့ ။
ထိပ်ဆုံးမှာ ဆက်ရှိနေရမယ် ” တဲ့
စိုးရိမ်မူ၊ သနားညှာတာမူ၊ ပံ့ပိုးကူညီမူတွေရဖို့
“ ရုဒ်မက် အတိုင်းဆက်သွားမယ် " တဲ့
ဘုန်းကြီးသွေးနဲ့ ရာဇပ္ပလ္လင်ကို ဆေးခဲ့ရတဲ့
၀ကွက် ရောက်ရှိနေရှာ ။
နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေတယ် ။
တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုတ်ပေးနေရတယ် ။
“ ရရင်ရ၊ မရရင်ချ ” မူကို ကိုင်စွဲကြရတော့မယ်
ကတိပေးသူတွေလည်း ရှိရဲ့ ။
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါး ရှည်ကြာသွားတဲ့
အခွင့်ထူးခံ စစ်ဗိုလ်တစ်စု အတွက်
နောက်ကို တထစ်ပြီးတထစ် ဆုတ်ပေးနေရတယ် ။
သေအံ့ ဆဲဆဲ ။
ပေါက်ကွဲလု တဲတဲ ။
အောင်ပွဲက ဒို့ကိုစောင့်နေပြီ ။
“ဒီ…. ၂၀၀၈” ဟာ
စစ်အာဏာရှင်စနစ် မုချ ကျဆုံးရမယ်
ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ်ဟေ့…… ။
၁၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၈
Posted by Nyein Chan Aung at 9:21:00 PM5comments